Ibhotile yombane yeHydraulic jack - EPONT
Ibhotile yombane yeHydraulic jack
Ukho kwindawo efanelekileyo Ibhotile yombane yeHydraulic jack.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana EPONT.siqinisekisa ukuba ilapha EPONT.
Yakhiwe ngogcino lwamandla e-eco-amandla, kukugcinwa kwamandla. Igcina umsebenzi ofanelekileyo echitha amandla amakhulu okanye amandla okusebenza..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu Ibhotile yombane yeHydraulic jack.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
I-Hydraulic Welding jack 50tUkukhuphela i-Whydraulic Weldraulic yelding jack 50t Umbolekisi, inkampani yingqokelela ye-injini eyahlukeneyo ye-injini, phantsi i-jack ye-3T, umhlaba, umhlaba, imveliso kunye nentengiso.
I-Epont ye-Epont yingqokelela ye-injini eyahlukeneyo ye-injini, phantsi i-jack ye-3T, i-Jack yoThutho loMgangatho eli lishishini elikhethekileyo lophando, uphuhliso, imveliso kunye nentengiso.1. Sineziqinisekiso zemfundo: Sinesatifikethi semfundo esisesikweni2. Itekhnoloji yeMveliso: Uphando oluqhubekayo kunye nezinto ezintsha3. Ukoneliseka kwabathengi: Nika imveliso eyoneleyo
Ibhotile yesiqhelo yebhotile ye-Hydraulic. Akukho kuphika ukuba le mveliso inefuthe elihle kwimood kwaye ibonelele ukuphumla, ngakumbi isiphazamiso sokulala kunye neentloko. Imveliso inomgangatho omkhulu womhlaba. Ukutshatyalaliswa komphezulu awuyi kuba lula ukunxiba ezinjengee-rocks, ii-istches, imingxunya okanye ikwaphukile. Olu hlobo lwebhedi lunokunceda umntu alale kakuhle ebusuku, onceda ekuphuculeni imemori kwaye aphucule amandla okugxininisa.I-Epont Introto eqhelekileyo ye-Hydraulic Ibhotile yebhotile yeBhock Ibhotile, iMveliso yethu ithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-30 njenge-USA, eJamani, e-Itana, eCanada, i-Eanada, i-ECANAR. Imoto, oomatshini bokwakha, sele besinentsebenziswano engaphezulu kwe-10 yehlabathi €
Okunye abavelisi bezixhobo eziphakamisayo ezivela eTshayina
I-Epont ye-Epont yingqokelela ye-injini eyahlukeneyo ye-injini, phantsi i-jack ye-3T, i-Jack yoThutho loMgangatho eli lishishini elikhethekileyo lophando, uphuhliso, imveliso kunye nentengiso.
Intsimbi.Le mveliso iqukethe uvavanyo lweqela lethu le-QC kunye neqela lesithathu eligunyazisiweyo. ikhethwe ngokuvelisa iminyaka emininzi.Imveliso yi-hypoallergenic kwaye ke iqaqamba ulusu, ukunciphisa ubukho bemingcipheko yokuphendula.
Umgangatho we-hydraulic jack jack abenzi
Le mveliso iqukethe uvavanyo lweqela lethu le-QC kunye neqela lesithathu eligunyazisiweyo. ikhethwe ngokuvelisa iminyaka emininzi. Imveliso yi-hypoallergenic kwaye ke iqaqamba ulusu, ukunciphisa ubukho bemingcipheko yokuphendula.Ukukhupha umsebenzi wensimbi yensimbi, sinemigca emi-4 yokuvelisa kunye nemigca emi-2 yobushushu, ibhotile yebhotile ngenye imini sinokuvelisa malunga ne-5000pcs, malunga ne-jack yomgangatho sinokuvelisa i-500P.